true integrity /zu-ZA/tools-for-life/integrity/steps/good-and-evil.html read 2 11 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/integrity_zu_ZA.jpg UbuQotho NokweThembeka
Noma nini lapho abantu behlangana ukuze basebenze njengamaqembu, benza izivumelwano, noma ngabe zishiwo noma cha, maqondana nokuthi yikuphi okulungile nokungalungile—ngamanye amagama, okuzosiza ukusinda kweqembu nokuthi yini okuzobhubhisa ekusindeni kwalo.
Lapho into inezimpawu zokusinda, kuthiwa inesimilo. Isenzo sokusinda isenzo sokuziphatha. Futhi lezo zinto eziphikisana nokusinda zithathwa njengezokuziphatha okubi.
Kungakhathalekile ukuthi uneqembu labantu ababili abasebenza ndawonye, ​​abantu ababili abakha umshado noma izwe lonke liyakhiwa—akunandaba ukuthi iqembu lingakanani—banquma ngezivumelwano ezithile. Kungaba yisivumelwano sosuku, isivumelwano senyanga noma isivumelwano seminyaka engamakhulu amahlanu ezayo.
Ukwephulwa kwalezi ezinye zezivumelwano kuyaziwa njengeseqo. Lapho amalungu eqembu ephula i-moral code evunyelwe, ngokuvamile anomuzwa wokuthi ngeke atshele abanye ngayo. Iziphambeko zingakha bese zibangela ukwephulwa kwezivumelwano, okudala ukuthi iqembu lihlukane.
Kwi-Scientology, inkinga ebangelwa izeqo ezinjalo ihlolisisiwe ngemininingwane enkulu. Kunezingxenye ezimbili zale nkinga futhi zichazwe esihlokweni esilandelayo.